hydroponics ယဉ်ကျေးမှုရေ - Hidroponia Asociación Hidroponica Mexicana
စက်ရုံရေက၎င်း၏ဖျက်သိမ်းအာဟာရစုပ်ယူသောကနဦးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကနေ, ဒီအခွအေနေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသောမည်သည့်နည်းလမ်းကိုစသည်တို့ကို, အမြစ်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုအလွှာဟာရေပေါ်, (aeroponics အသစ်သောယဉ်ကျေးမှုစနစ်, hydroponics ၏အဓိပ္ပါယ်တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည် ) ။ သင်တန်း၏, အပင်တစ်ပင်မြေ၌ရိုးရာသီးနှံအတွက်ဒါမှမဟုတ်အော်ဂဲနစ်သီးနှံအတွက်သီးများစွာသီးတတ်ပုံကို, သို့သော်, အခြေခံခြားနားချက်စက်ရုံအစာအာဟာရ၏ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါသည်ကြောင့်အကယ်စင်စစ်ဤသူရဝုဏ်ကိုအလွယ်တကူပေးစိန်ခေါ်နိုင် မည်သည့်ယဉ်ကျေးမှု၌အာဟာရထိန်းချုပ်မှုလုံးဝနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်, ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့်, hydroponics ၏အခြေခံဝုဏ်၏တဦးတည်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပြီး, သုတေသနနှင့်အညီ, စက်ရုံများ၏အာဟာရစီမံခန့်ခွဲမှုသာဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောရောင်ခြည်, aeration သည် CO2 အဆင့်အဖြစ်မျိုးကွဲထိန်းချုပ်ဖို့ , ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ, ကအခြားစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များအတွက်စက်ရုံရုံ observable ပြဿနာများ၏အမြစ်ပေါ်အပူချိန်၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မှပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Hydroponics အစားစိုက်ပျိုးရေးမြေဆီလွှာ၏ဓာတ်သတ္တုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူအပင်ကြီးထွားလာတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ထက်အများကြီးပိုပါတယ်, ဒါကြောင့်မည်သည့်အာကာသဖို့သင့်လျော်သောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအိမ်မှာဒါမှမဟုတ်အကြီးစားသေးငယ်တဲ့နေရာလွတ်စက်ရုံညစ်ညမ်းမှုထုတ်လုပ်ရန်အနေနဲ့အထူးကြပ်မတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်, မြင့်သောအာဟာရတန်ဖိုးအပေါ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, အဖြစ်စီးပွားရေးနှင့်လည်းဂေဟစနစ်နှင့် Self-ရေရှည်တည်တံ့ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မယ့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုလေ့လာစူးစမ်းရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
မှတ်စု: ဗီဒီယိုများ www.hidroponia.org.mx စပိန်ဗားရှင်းအတွက်သာရရှိနိုင်ပါသည်။
hcaatrone ray k ၎inneat hpyetsaim aarharr hcote yuu saw k n u sharhpwaytwaeshimhu k nay, deahkw aay nay twaesonehkaepyee saw mai saeet naeelamko hcasaithoetko,amyitkout pell seenhaanmyarr ko aalwhar har raypaw, (aeroponics aasait saw yainkyaayymhu hcanait, hydroponics eat aadhipparal twin htaeet swinhtarrparsai ) . saintaann eat,apain tait pain myay roerar seenhaan aatwat darmhamahote aawgellnait seenhaan aatwat see myarrhcwar see taat pone ko, shoetsaw, aahkyayhkan hkyarrnarrhkyet hcaatroneahcar aarharr eat hteinhkyaotemhu hpyitparsai kyawwng aakaal hcainhcait i suu r wun ko aalwaltakuu payy hceinhkawnine mai saeet yainkyaayymhu aarharr hteinhkyaotemhu lonew neeparr mahpyitnine hpyitparsai, kyampyin pawmhar muutaipartaal .
hthoetkyawwng, hydroponics eat aahkyayhkan wun eat t u taee ko hteinhkyaote ninehcwm hpyitpyee, sutaysan nhanganye, hcaatrone myarreat aarharr hceman hkaant hkwal mhu sar hpyitparsai, darpaymay laee htokaeshoetsaw raunghkyi, aeration sai CO2 aasang aahpyit myoekwalhteinhkyaotehphoet , swaymyoe hco htine s, k aahkyarr hcitepyoe naeehcanait myarraatwat hcaatronerone observable pyaဿnarmyarr eata myit paw aapuuhkyane eat saatroutmhu ko hconehcamhcaitsayyraan mha pain hpyitnineparsai .
Hydroponics aahcarr hcitepyoerayy myayse lwhar eat dharatsattu hpyayshinnnaeemyarr nhaint aatuuapain kyeehtwarrlar tae naeelam hpyitpartaal . darpaymaae aamhaantakaal htaat aamyarrkyee po partaal, dar kyount mai saeet aarkars hphoet saint lyaw saw aahkyarr rwayhkyaalhcarar hpyitparsai, shoetmahote rainnnhaeemyahuutnhaanmhu aainmhar